အတည်ပြုချက်မပါဘဲ Instagram ကိုထည့်ပါ➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
ဇန်နဝါရီလ 28, 20190မှတ်ချက်များ 11197
သငျသညျ codes တွေကိုသင်တို့အဘို့တစ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာစပ်စုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပလီကေးရှင်းတိုးချဲ့။ ထိုအခါနာမည်ကြီးလူမှုကွန်ယက်ကြောင့် Instagram ကိုသင်သည်သူတို့၏အကောင့် helplessly သော့ခတ်နေသည်အဖြစ်မြင်သောသူအများအပြားသုံးစွဲသူများထိခိုက်မူကြောင်းကိုပြဿနာဤအမျိုးအစားရှိသည်။ သို့သော်ကောင်းကောင်း, နှစ်ခုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများရှိပါသည် သင့်ရဲ့အခွအေနေဖြေရှင်းရန်။ ပထမဦးဆုံးထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် Instagram ကို စိစစ်အတည်ပြုကုဒ်နဲ့ဒုတိယမ code တွေရဲ့ဆိုက်ရောက်အတင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ရလဒ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့သိရန်လည်းအရေးကြီးပါသည် စိစစ်အတည်ပြု codes တွေကိုအားလုံးမဆိုးဖြစ်ကြသည်။
codes တွေကိုနေကြသည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများ အီးမေးလ်များကို အသုံးပြု. ပလက်ဖောင်းနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့် စာတို အတွက် သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှသင့်အကောင့်လင့်ထားသည်။ (ထိုအောင်မြင်လျှင်) ဤလမ်း, တစ်စုံတစ်ဦးကမဟုတ်ရင်သူတို့ကိုသင်မှမရနိုငျသညျ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုနေရာလေးကိုရှိသင့်သင့်စကားဝှက်အပြင်, သင့်အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုလားလျှင်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုအ စိစစ်အတည်ပြု codes တွေကို, သင့် Instagram ကိုရန်အတားအဆီးသို့မဟုတ်အခြားလူမှုကွန်ယက်ဖြစ်လာ။
အဘယ်ကြောင့်စိစစ်အတည်ပြု codes တွေကို Insagram နှင့်အတူပြဿနာများရှိသနညျး
ဒီဖြစ်ပေါ်ဖို့အတှကျအကြောင်းရင်းများ, ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် လုံခြုံရေးယန္တရား ပလက်ဖောင်း Instagram ကို။ တစ်ဦးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်အီးမေးလ် တည်ဆဲအကောင့် သို့မဟုတ် redirigendo သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာပြဿနာတွေမိတ်ဆက်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နိုငျခဲ့အဖြစ် မှားယွင်းစွာသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို။ ထိုအခါသင်သည်အတည်ပြုရန်ကုဒ်မပါဘဲ Instagram ကိုရိုက်ထည့်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာနေပါလိမ့်မည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ဖြေရှင်းချက်အတူတူပါပဲ။
အခါအီးမေးလ်က Instagram ကိုအခွင့်ထူးစိစစ်အတည်ပြုသိရန်အခှငျ့ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လှုပ်ရှားမှုသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် တခါတရံပို့ပေး စိစစ်အတည်ပြု codes တွေကို ကြောင်းမလာစေနိုင်သည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဤအကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။
သင်ထည့်သွင်းအရေအတွက်ကိုမှန်ကန် Check, ဒီတော့လျှင်, သင်အတည်ပြုရန်ကုဒ်ခံယူနိုင်အောင်ကတက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်သေချာပါစေ။ ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့မပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျရရှိနိုင်ရှိသည်အခြားနံပါတ်တစ်ခုကြိုးစားကြ ဒီအဘို့, သင်၌ရှိသည်အရေအတွက်ကပြောင်းလဲပစ်ရမယ် Instagram အကောင့်. ကနေသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် တစ်ဖုန်းနှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကို PC ။
သင့်ရဲ့ spam များကို folder ကို Check စာတိုဒါဟာကုဒ်ရှိကွောငျးဖြစ်နိုင်သည်။ မရလျှင်, သုံးပြီးကြိုးစားကြည့် backup လုပ်ထား codes တွေကို လက်ခံရရှိခဲ့သောရာ ရသောအခါ ငါသည်သင်တို့၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံထဲတွင်ရှာတွေ့ထားတဲ့, Instagram အကောင့်ထင်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့သည်ဆိုပါက, သင်ပါလိမ့်မယ် Instagram ကိုရိုက်ထည့်ပါ အဘယ်သူမျှမစိစစ်အတည်ပြုကုဒ်။
ကွန်ပျူတာပိတ်ပစ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ထားတဲ့အတွက်တည်နေရာကိုပြောင်းလဲ။ ဒီတစ်ခါလည်းပြဿနာကိုဤသူကား အဆိုပါ signal ကိုပြန်ညွှန်း.
အထက်ပါအဘယ်သူအားမျှကြိုးစားရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင် Instagram ကိုအသိပေး အကူအညီခုံမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းချက်ပေးသွားမှာပါဒါကြောင့်။
သင်တို့မူကား, fix ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ် ထို့နောက်လာမည့် option ကိုစမ်းပါ။
ဤကိစ္စတွင်သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိရန်ဝဘ်ရဲ့အဝါရောင်စာမျက်နှာများအသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ် SMS ကို, ခေါ်ဆိုခ အွန်လိုင်း SMS ကိုလက်ခံရယူ. အပြည့်အဝဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည် အခမဲ့နှင့်မျှမမှတ်ပုံတင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်။ စိစစ်အတည်ပြုကုဒ်ဝင်မပါဘဲ Instagram ကိုဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးလျှင်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုသင်ကူညီကြလိမ့်မည်, ဤအခြေလှမ်းများအောက်ပါ.
ပထမဦးဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်ပါသည် အွန်လိုင်း SMS ကိုလက်ခံရယူ။ အတွင်းအပြင်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်၏စာရင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှနံပါတ်များ နောက်က, မက်ဆေ့ခ်ျကနောက်ဆုံး 24 နာရီအတွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့စာနယ်ဇင်း မိုဘိုင်းဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျ။ အဆိုပါကွန်ယက်ကိုသငျသညျနည်းပါးလာမက်ဆေ့ခ်ျများရှိသည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးဆေးဆိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်မပါဘူးဆိုရင်, အခြားဖုန်းနံပါတ်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်ဒီစာမျက်နှာကိုသောက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ် updated မပေးပါ။
စာမကျြနှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုဧည့်ခံဖို့ go, ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်ထိပ်မှာ, သင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ က copy "+" နိမိတ်လက္ခဏာအပါအဝငျသင်သည်ဤအမှုကိုပြုလိုက်တဲ့အခါ, သင်ပြသသောပြတင်းပေါက်၌ paste Instagram ကို နှင့်စာနယ်ဇင်း "Send".
ဖုန်းနံပါတ်ကိုစလှေတျသောအခါ, Intagram ရကြလိမ့်မည် အတည်ပြုကုဒ်ပေးပို့။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် update ကိုလက်ခံရရှိပြန်စာမကျြနှာသို့သွားရပေမည်။
code ကို copy
actulizada စာမျက်နှာအားဖြင့်သင်တို့ကို, အောက်ခြေမှာတွေ့ရသော table ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါသည် လက်ခံရရှိသောနောက်ဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျ။ သင်ပြုနောက်တစ်နေ့အရာအတည်ပြုကုဒ်ရှာတွေ့ထားတဲ့ Instagram ကိုစေလွှတ်လိမ့်မည် copy ဖြစ်ပါသည် ကြောကျတိုငျ ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message]. အဆိုပါသတင်းစကားကိုပထမဦးဆုံးအကြားဖြစ်သင့်တယ်။ အလားတူပင်ကော်လံ၏အရေအတွက်ကိုစစ်ဆေးပေးတယ် အရေအတွက်အားကနေ 69988 ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးပိ Code ကို
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးစေရန်, သင်သည်ယခင်ခြေလှမ်းကိုသင်မေတ္တာရပ်ခံဘယ်မှာ Instagram ကိုစာမျက်နှာအတွက်ကူးယူ code ကို paste ။ ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, သင်ပြီးသားရပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ Instagram အကောင့်စိစစ်ပြီး နှင့်သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာမပါဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် Instagram ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးသီချင်းစာသား.
2 အဘယ်ကြောင့်စိစစ်အတည်ပြု codes တွေကို Insagram နှင့်အတူပြဿနာများရှိသနညျး
3 စိစစ်အတည်ပြုကုဒ်ဝင်မပါဘဲ Instagram ကို
4.1 ခုနှစ်တွင် Sign
4.4 code ကို copy
4.5 ငါးပိ Code ကို
Instagram ကို ဖြတ်၍ paste လုပ်ရန်
Instagram ကိုထိပ်ဆုံးပုံပြင်များ Download
Instagram ကိုအပေါ်တည်နေရာ Customize
ဇွန်လ 16, 2019
အဘယ်သူသည် Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံထားမည်လား
IK4 Cheat များ